လူသားအားလုံးအတွက်: October 2010
21 ရာစု ချစ်သမျှကို
Posted by မိုးယံ at 11:34 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
These guys have to killed this abnormally huge snake, because she has been threaten for their village. Her stomach was huge and these guys decided to find out what is in her. When they opened it, they sawadisgusting scene. She ate about 20 smaller snakes.
Posted by မိုးယံ at 10:05 PM7comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ပုရိသ နဲ့ ဂေး ခွဲနိုင်ဖို့ အရေး ကြိုးစားကြည့်ရအောင်နော်။
ဟောဒီမှာ နှိပ်ကြ ကိုကိုတို့ရေ။
Posted by မိုးယံ at 7:34 PM9comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မုန်ုတိုင်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့တွင် လူ ၂၂ ဦးသေ၊ ၁၅ဦးပျောက်ဆုံးနှင့်ပျက်စီးမှု အများဆုံးဖြစ်
မြေပုံမြို့တွင်း တစ်နေရာအား အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဂီရိကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ်သည် လူအသေအပျောက်နှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး မင်းပြားနှင့်ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တို့သည်လည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များပြားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ က ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ၀င်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဂီရိကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ် တွင် ၂၂ ဦးသေဆုံး၊ ၁၅ ဦး ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကာ တံတား နှစ်စင်း၊ အိမ် ၂၀၈၈ လုံး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ရှစ်ကျောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ ၃၄ လုံး၊ စာသင်ကျောင်း ၁၃ ကျောင်းနှင့် စက်လှေအစင်း ၈၀ တို့ နစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့သည်ဟု အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အတူ မင်းပြားမြို့နယ်တွင် ငါးဦးသေဆုံးကာ အိမ် ၅၉၇ လုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ သုံးလုံး၊ စာသင်ကျောင်းလေးကျောင်း၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် အိမ် ၁၀၃၅ လုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံအလုံး ၄၀၊ စာ သင်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းတို့ အမိုးလန် ပျက်စီးခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဂီရိသည် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ကို စတင်ဖြတ်ကျော်ကာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိမြို့နယ်များကို သက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြေပုံမြို့နယ် မှာ ပျက်စီးမှု အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
မြေပုံမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက် ကိုးခု အတွင်း အိမ်ခြေ ၂၃၃၄ ၀န်းကျင်ရှိပြီး ကျားမလူဦးရေ ၁၂၅၄၄ ရှိကြောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၂ အုပ်စုမှ ရွာပေါင်း ၁၃၉ ရွာ၌ အိမ်ခြေ ၂၂၁၀၀ ခန့် ရှိရာ တွင် လူဦးရေ ၂၀၆၄၄ ခန့်ရှိကြောင်း၊ မပျက်စီးဘဲကျန်ရှိခဲ့သော အိမ်အများစုမှာလည်း အမိုးလန်ပျက်စီးကြောင်း သိရသည်။
"အရင်ကလည်း မုန်တိုင်းတွေ ကြုံဖူးထားတော့ အရင်လိုပဲသစ်ပင်လဲ၊ ခေါင်မိုးအနည်းအကျဉ်းကွာရုံလောက် ဖြစ်မယ်ထင်ထားခဲ့တယ်လေ။ မိသားစု ကိုတော့ တိုက်အိမ်တစ်လုံးပေါ် သွားနေခိုင်းပြီး ကျွန်တော်က တစ်ယောက် တည်း ကျန်ခဲ့တာ။ ကံကောင်းလို့ အိမ်အောက်ကိုဆင်းပြေးတာမြန်ပေလို့ သာပေါ့၊ မဟုတ်ရင်သေတယ်။ ခေါင် မိုးတွေက အားလုံးပြုတ်ကျတာလေ၊ ပြီးမှ ဘေးအိမ်ကို ထွက်ပြေးလို့ လွတ်သွားရတာပါ"ဟု မြေပုံမြို့နယ်မှ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
စစ်တွေမြို့မှ ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များ ၂၃ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် မြေပုံမြို့သို့ ရောက်ရှိသဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒေသခံများသည် ဘေးလွတ် ရာသို့ကြိုတင် ပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့သဖြင့် အသေအပျောက် နည်းပါးခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးသူအများစုမှာ သစ်ပင်ပိ၍ သေသူများပြားကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရာတွင်လည်း ခိုင်ခန့်သည်ဟု ထင်ကြသော အိမ်ကြီးများ၊ ကုန်းမြင့်ပိုင်းများသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အသက်ကယ်ကုန်းမြင့် များရှိသော်လည်း နေစရာ အဆောက်အအုံမရှိသဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ကိုသာ အဓိက အားထားခဲ့ကြကြောင်း၊ ပြေးနိုင်ရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သဖြင့် လူအသေအပျောက်နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု နည်းပါးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
"မြို့ပေါ်မှာ အသေအပျောက် မရှိသလောက်ပဲ။ ကျေးလက်မှာတော့ အသေအပျောက်ရှိခဲ့တယ်။ ကျေးရွာ တွေကို စက်လှေတွေနဲ့ သွားရတဲ့အပြင် အလှမ်းဝေးတယ်။ အသွားအပြန် တစ်ရက်နီးပါးကုန်နိုင်တယ်။။ စက်လှေ အလွယ်တကူငှားလို့မရဘူး။ တချို့ ရွာတွေမှာ ကိုင်း၊ ပျဉ်း၊ ၀ါးတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်တဲ့အိမ်များတော့ တိုင် တောင်မကျန်ဘူး"ဟု မြေပုံမြို့နယ်သို့ သွားရောက်ခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
မြေပုံမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၂ ခုအတွင်း အဓိကပျက်စီးခဲ့ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရသည်။
"ကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်မှာ ပြင်ဖြူ မော်၊ ကုလားပိုက်ဆိပ်၊ ဆားပြင်ကွင်း၊ စေတီတောင်နဲ့ ရပ်ကွက်အများစု ပျက်စီးမှုရှိပါတယ်။ လောလောဆယ် စာရင်းအရတော့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ခုနစ်ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း လေး ကျောင်းနဲ့ ငါးသင်တန်းကျောင်းမှာ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရတဲ့သူ ၄၀၀၀ ကျော် လောက်ရှိနေပါတယ်" ဟု မြို့ခံတစ်ဦး က ပြောကြားခဲ့သည်။
"လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်း အစုံအလင် မရောက်ရှိသေးပါဘူး။ နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်တဲ့ သူတွေခိုလှုံနေပါတယ်။ လက်ရှိအထိတော့ မြို့ပေါ်မှာတင် ၅၇၀၀ ဦးကျော် ရှိနေတယ်။ နယ်တွေမပါသေးပါဘူး။ ဒေသခံတွေ၊ လူငယ်တွေကတော့ တတ်အားသရွေ့ ကူညီနေပါတယ်"ဟု ကျောက်ဖြူမြို့တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦး က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မုန်တိုင်းသင့်မြို့နယ်များတွင် မုန်တိုင်းကြောင့် တောင်သူများ သိုလှောင်ထားသည့် ၀မ်းစာဆန်၊ ၀မ်းစာစပါးများပျက်စီးမှု များရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
Posted by မောင်စေတနာ at 4:11 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 8:05 PM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 2:05 AM 8 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 2:05 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 12:20 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 1:35 AM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 4:22 PM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 1:56 PM3comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ချန်မထားခဲပါနဲ့ - ခိုင်မြဲသာ + ကာကာ
ပြန်လာပါ - ပေါက်စီ+နေနေ
ဘယ်အချိန်ပြန်လာမလဲ - ရေမွန် +ခင်မြတ်သူ
မငယ်တော့ဘူး - ဖြိုးကြီး + ကုဋာခင်
မင်းထင်လို့ပါ - ရဲလေး+ပဲပဲ
ရင်ခုန်သံအမြန်နှုန်း - အောင်သီဟ+အေးမြတ်သူ
အချစ်ကွန်ယက် - အောင်လ+လပြည့်ကဗျာ
အချစ်များနဲ့အတူ - ထွဋ်ခေါင်ဦး + သက်မှူးခင်
အချစ်ရှိနေသမျှ - ဖိုးကာ+ကာကာ
Posted by မိုးယံ at 1:40 AM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 1:27 AM7comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နေတဲ့ ငါ့နှလုံးသားကို
ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ပါရစေ
ပစ်ပယ်ခ၀ါ ချလို့ ၀ပ်တွားခဲ့ပါတယ်
Posted by မိုးယံ at 2:42 AM6comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 1:01 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 8:04 PM 12 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ချစ်သူများ အထူးသဖြင့် ယောကျာင်္းလေးများသတိပြု၇န် ။ ရှောင်ရှားရန်အတွက် ကျွန်တော် စေတနာ ဖြင့်ရေးသား အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။သည်အဖြစ်အပျက်သည် အမှန်တကယ်ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အဖြစ်မှန် ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် ပြောချင်တာက အခုတင်ထားသည့် ကောင်မလေးသုံးယောက်စလုံး သည်ချစ်သူရည်းစား ရှိပြီးသား ယောကျာင်္းလေးများ အကောင့်ကိုအပ်၍ သူတို့ဘာသာ မိတ်ဆက်ပြီး သူငယ်ချင်းအနေ နဲ့စကား ပြောပါသည်။
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းကလဲ သူငယ်ချင်းကို ခင်တတ်မင်တတ် သဖြင့် ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ ပြန်ပြောပါသည်။ထို့နောက် အပြင်မှာတွေ့ ဖို့သူ ကပဲစပြီး လာခဲ့ပါမည်ဟုပြောသည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကလဲ ငါအားရင်လာခဲ့ မယ် ငါ့ ကောင်မလေးပါခေါ်လာခဲ့ မည်ပြောသည်
သူကခေါ်မလာပါနဲ့ပြောတော့ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းကငါမလာတော့ ဘူးဟာ တော်ကြာနင်နဲ့ တွေ့တာ ငါ့ ကောင်မလေး တစ်မျိုးထင်အုံးမယ် ပြောပြီး မလာတော့ပါ. ထို့နောက် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း လုပ်နေသော အင်တာနက် ဆိုင်တွင် မကြာခဏသူ့သူငယ်ချင်းများနဲ့သုံးပါသည်။ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းကတော့မျက်မှန်း တမ်းမိ နေသော cutomers ဖြစ်နေသဖြင့် ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံပါသည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော့် သူငယ် ချင်းကို ငါနင့်ကောင်မလေး မေးလ်ကို သိချင်တယ်ဟု ပြောသဖြင့် အေးသိချင်ရင် နင်အပ်လိုက်လေ ငါ့ကောင်မလေးက သဘောကောင်းပါတယ်ဟ ပြောပြီး ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက သူ့ကောင်မလေးမေလ်ကို ပေးလိုက်သည်...
ထိ်ု့နောက် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း၏ ကောင်မလေးအကောင့်ကိုအပ်ပြီး သူနဲ့ သိတဲ့ အကြောင်း သူ့ သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးနဲ့လဲ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကြူတဲ့ အကြောင်း VZO ပြောတဲ့ အကြောင်း သူ့ သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးရဲ့ ပုံနဲ့email address ပါ ပေးပြီး မဟုတ်မမှန် လီဆယ်ကာ ဂုံးတိုက်ပါတော့ သည်။ ကျွန်တော့့််သူငယ်ချင်းရဲ့ ချစ်သူကလဲ ဒီအမကြီးပြောတာ မှန်နိုင်သည်။အထောက်အထား ပြည့်စုံ သည်ဟုဆိုကာကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း ကို ကွိုင်ရှာပါတော့ သည်။အမှန်မှာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းသည် သူ့ အင်တာနက်ဆိုင်တွင် လာသုံး သည့်သူမမှလွဲပြီး သူမနဲ့ ပတ်သက် သည့်မည့်သည့် သူငယ်ချင်းမိန်းကို လေးကိုမှမသိပါ။ မြင်လဲမမြင်ဘူးပါ။ သူမသည် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနဲ့ သူ့ ချစ်သူတို့ ချစ်ကြသည် ။ ချစ်ကြသည်မှာလဲ ၅နှစ်ကျော်ပြီ ကို မနာလိုမရှုစိတ်နဲ့ယုတ်မာသည့် အကြံနဲ့ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းစုံတွဲကို သွေးထိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းနဲ့ သူ့ ချစ်သူ ရန်အကြီးအကျယ်ဖြစ်၍ နှစ်ဘက်မိဘသိသည့်တိုင်စကားများ ကြရပါသည်။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကလဲ ငါမှန်တယ် ဘယ်သူနဲ့ မဆို ကြိုက်တဲ့ နေရာမှာ ရှင်းရဲတယ်။အဲ့ ဒီမဟုတ်မမှန်တာ ကိုပြောတဲ့ မိန်းကလေးရော သူနဲ့ ဖောက်ပြန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကာယကံရှင်မိန်းကလေးပါခေါ်လာခဲ့အချိန်မရွေး ရှင်းလို့ရတယ်လို့ စိန်ခေါ်ခဲ့ပါသည် ။ အင်မတန်မှ ယုတ်မာသော အကျိုးမရှိသော မိန်းမယုတ်များရဲ့ လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကလည်း သူ့ ဘက်ကမှန်ရင် နောက်မဆုတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ ဒါနဲ့ သူကောင်မလေး ကလဲ စိတ်နုတော့ ဒီအမကြီးရဲ့အထောက်အထားက ခိုင်လုံတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး တယူသန်သတ်မှတ်ပြီး စကား များ၍ သူ့ ကောင်လေးအိမ်မှစိတ်လိုက်မာန်ပါပြန်သွားပါတယ်။
လမ်းမှာ သူ့ကောင်မလေး Car Accident ဖြစ်၍ ဆေးရုံတင် လိုက်ရပါတယ်။ သူ့ ကောင်မလေးကလဲ မွေးကတည်း ကနှလုံးရောဂါ အခံရှိ၍ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရကြောင်း နှလုံး အစားထိုးကုမှသာ အသက် ရှည်ရှည် နေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှလုံးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများက ပြောပါတယ် ။ ခုတော့အပြစ်မဲ့တဲ့ ကောင် မလေးခမျာ ဆေးရုံကဆင်းလာသည့်တိုင် နှလုံးရောဂါနှင့် အိပ်ရာပေါ်မှာ ဗုံးဗုံးလဲနေရပါတယ် ။ဆေးနဲ့သာ အသက်ဆက် နေရပါတယ်။
အဲ့ ဒီ ဂျောက်ချတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ တိုက်ရိုက်ရှင်းဖို့သွားတော့အဲ့ ဒီမိန်းကလေးက ရှောင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက လူတစ်ဖက်ကို ဒုက္ခရောက်နိုင်သည့်အထိ ပျက်ရယ်ပြု ချောက်ချခြင်းမပြုမိဖို့ပါပဲ။ အားလုံးကျွန်တော့် ဒီဆိုဒ်မှညီအကိုများ ကိုသတိပေး ။ သတိထားရမယ့်အနေနဲ့အဲဒီ မိန်းမယုတ်များရဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ သူတို့ရဲ့မေးလ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် ။ အွန်လိုင်းမှာတောင် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း အခုမှပဲ သိလာ တော့တယ်။ အားလုံးပဲချစ်သူများ ကြားစကားကိုမယုံဘဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်သစ္စာရှိရှိနဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည် နေပေးကြပါလို့ ..........
အဓိက ချောက်တွန်းသူမိန်းမရဲ့email address မှာ pannei09@gmail.com ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်ပါ သည်ဟု မဟုတ် လီဆယ်ပြောသော မိန်းမရဲ့ email address မှာ aquamarine001985@gmail.com
အထက်ပါပုံများမှာ အပေါ်ဆုံး ခလယ်ကပုံမှာ pannei09@gmail.com ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ညဘက်က အသားဖြူဖြူ နားဆွဲနဲ့ ပုံမှာ aquamarine001985@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံး ပဲ ကျန်းမာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ မြန်မာချစ်သူအသင်းဝင် အပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ။
သူ့က အဖြစ်မှန်ပြောတော့ တစ်ကယ်လို့ ယုံတဲ့ ကိုယ်က အဲလိုမိန်းမတွေကို စိတ်ပျက်မိသား။ အဲဒါလေး ပါပဲ ။ ဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးတော့ ခံစားရသား။ အဲနောက် ကံကောင်းတာကတော့ ကိုယ်က တစ်ကိုယ်ထဲ အဖော်မပါဆိုတော့ ဘူလူတွေ ဘာကြောကြော ဂျာ။ အေးချေးပဲ။ နာ ကွ။
Posted by မိုးယံ at 2:00 PM9comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 1:58 AM4comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မင်းအတွက်အမြဲအဆင်သင့် - နေနေ
မပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့အချစ် - စနေ
မျက်ရည်လက်နက် - မီးနို
လမ်းပြဦး - ဒီသြ
နှလုံးသားအလှဆင်တေး - ချမ်းချမ်း+နေနေ
အချစ်ရေစက် - အောင်ခန့်+နေနေ
အရင်တိုင်းထက် - ကောင်းကောင်း
အဝေးဆုံး - ချမ်းချမ်း
ပေးဆပ်အချစ် - ကောင်းကောင်း
ပြန်ဆုံမယ့်တစ်နေ့ - အိုင်ရင်း
Posted by မိုးယံ at 6:14 AM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မောင်စေတနာ at 4:04 PM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မောင်စေတနာ at 7:24 PM3comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မောင်စေတနာ at 7:08 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest